Ugu Dambeyn - Waa Xog Xog Siinaysa La Socodka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada! | Martech Zone
Ugu Dambeyn - Waa Xog Xog Siinaysa La Socodka Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada!
Arbacada, Juun 3, 2015 Arbacada, Juun 3, 2015 Douglas Karr
Dadka cajiibka ah ee ka tirsan Baadhaha Warbaahinta Bulshada ayaa bilaabay bulshadooda xubinnimada gaarka ah,
Bulshada Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada. Ujeedada Jaaliyaddu waa inay kaa caawiso inaad ogaato fikradaha cusub, iska ilaaliso tijaabada iyo qaladka, inaad hirgeliso xeeladaha cusub ee bulshada iyo inaad hesho waxa ugu fiican ee ku habboon suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Markaad ku biirto Bulshada, waxaad heli doontaa saddex tababar oo asal ah bil kasta oo waqtigooda ku habboon, taatiko iyo khibrad leh. Tani waxay ka dhigan tahay inaad heli doonto tababarka socda ee aad ugu baahan tahay inaad ku hirgeliso dhammaan xeeladaha suuqgeynta warbaahinta bulshada ee ugu dambeeyay ee muhiimka ah. Waxaa intaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad kula xiriiraan suuqleydaada sidaada oo kale.
Mar dambe uma baahnid inaad la yaabtid sida asaagaagu ula tacaalayo isla halganka aad tahay. Bulshada dhexdeeda, waxaad si sahal ah ula xiriiri kartaa suuqleyda kale, waxaad la wadaagi kartaa khibradaha oo aad is taageeri kartaa.
Waa tan qaybta qabow. Wax walba waxay ka dhacaan khadka tooska ah! Bulshada waxaa loo abuuray inay ahaato mid fudud oo ay heli karaan suuqleyda mashquulka ah ee adiga oo kale ah. Waad ka soo qayb geli kartaa fadhiyada tababarka waxaadna la macaamili kartaa suuqleyda kale raaxada kursigaaga xafiiska – meel kasta oo aad adduunka ka joogtid! Halkan u aad si aad wax dheeraad ah uga ogaato.
Kooxda ka socota baraha bulshada (Social Media Examiner) waxay shaqeynayeen kow iyo toban bilood si ay goob ugu abuuraan dad sidaada oo kale ah - suuqley mashquul badan iyo milkiileyaal ganacsi oo doonaya inay shaqaaleeyaan xeeladaha cusub ee bulsheed iyadoon wax badan oo tijaabo ah iyo qalad ah.
Waxay barteen in kabadan 4,500 suuqleyda si ay si dhab ah u fahmaan caqabadaha gaarka ah ee aad la kulanto. Waa tan waxa ay ogaadeen:
Runtii waad mashquulsan tahay waxaanad jeceshahay inaad waqti badan hesho si aad ula socoto adduunyada had iyo jeer isbeddelaysa ee suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Waxaad rabtaa hab fudud oo lagu ogaado xeeladaha cusub ee bulsheed ee keena natiijooyinka dhabta ah.
Waxaad dooneysaa inaad tirtirto tijaabada iyo qaladka oo aad diirada saarto waxa run ahaantii shaqeynaya, adigoon maleyn iyo tijaabin.
Waxaad raadineysaa faa'iido tartan ah.
Waxaad rabtaa inaad diirada saarto waxa sida ugu fiican u shaqeeya.
Macallimiintaadu waxay noqon doonaan khubaro dhinaca hoggaanka u ah warbaahinta bulshada; ku takhasusay Facebook, Twitter, LinkedIn iyo wixii ka dambeeya. Baadhaha Warbaahinta Bulshadu wuxuu marin u leeyahay keyd qoto dheer oo khubaro warshadeed ah oo kuu keeni doona tabtii ugu dambaysay, xeeladaha ugu habboon ee bulshada la xiriira si ay kaaga caawiyaan inaad sii joogtid dhinaca hoggaanka.
Ku soo biir 1000+ Saaxiiblayda Suuqa ah oo Hel Su'aalahaaga Warbaahinta Bulshada ka jawaab!
Shaacinta: Waxaan saaxiibo nahay kooxda Baadhista Warbaahinta Bulshada waxaanan u adeegsannaa iskuxirayaasha xiriirka si aan ugu dhiirrigelino dhacdooyinkooda iyo dalabyadooda.
Tags: kooxda suuq geyntaxubinnimada suuq geyntabulshada suuqgeyntaxubinMichael StelznerBulshada Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
AtEvent Card Scanner: Otatee oo Kor U Qaado Qabashada Hogaanka Dhacdooyinka